Vaovao - Andro fananganana ligy
Mba hampanan-karena ny fotoana ialan'ny mpiasa, hanamaivanana ny tsindry amin'ny asany, ary hanomezana azy ireo fotoana fialan-tsasatra tanteraka aorian'ny asa, Hangzhou Hengao Technology Co., Ltd. dia nikarakara hetsika fananganana ekipa ny 30 Desambra 2020, ary mpiasa 57 an'ny ny orinasa dia nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Taorian'ny niainany ny batisan'ny oram-baratra dia niseho tamin'ny lanitra ilay "Blue River blue" tsy hita. Tamin'ny 9 ora sy sasany dia nivory teo am-bavahadin'ny trano lehibe ny mpiasa rehetra ary niainga ho any amin'ilay toerana naleha - The Exposition Park. Nandritra izay rehetra izay dia nihomehy sy nihomehy izahay, nivezivezy teny amin'ny làlana foana mankamin'ny ao anatiny. Amin'ny 10 ora, ny mpiasa rehetra dia hiangona eo alohan'ny zaridaina lehibe hijerena ireo hetsika fananganana ekipa fampirantiana. Nozaraina ho fizarana dimy ity hetsika ity: mitsidika ny valan-javaboary, mitsimpona voankazo sy legioma, rafting anatiny, lalao misy ao anaty vondrona, ary barbecue mahafinaritra.
Nanaraka ilay torolàlana tao amin'ny efitrano fampirantiana zaridaina izahay mba hitsidika. Hitanay fa ao amin'ny trano fonenana iray ihany dia misy zavamaniry mahazatra any Shina sy zavamaniry sarobidy any amin'ny firenena vahiny, ary koa rakotra fampirantiana zavamaniry manokana. Rehefa avy nitsidika izahay dia nahatsapa fa nisokatra ny masonay rehetra. Ao anatin'ny fizotry ny fakana voankazo sy legioma, tena traikefa an-tanana izahay, mizara ny traikefa amin'ny fakana voankazo sy legioma, mamela ireo voankazo sy legioma an-trano izay tsy latsaky ny "amboara".
Nisy fiatoana kely taorian'ny sakafo atoandro. Avy eo, nivory teo amin'ny toerana malalaka ho an'ny lalao fanitarana ekipa ny mpiasa rehetra, nozaraina ho vondrona 5 izahay, isaky ny lalao mba hifaninana matanjaka, ny ekipan'ny ekipan'ny ekipa milamina sy mazava. Amin'izao fotoana izao, aza atao Etazonia ny fipoahan'ny kotrokorana lanitra, manandrana barbecue mandritra ny antsasaky ny fotoana mandatsaka orana tampoka, fianakaviana lehibe tsy ratsy toetr'andro no mahafinaritra, amin'ny tapany faharoa amin'ny tsingerintaona nahaterahana amin'ny tso-dranon'ny rehetra araka ny voalahatra, amin'ny androm-piainan'ny kintana dia nahazo ny fanomezana fitsingerenan'ny andro nahaterahana, orinasa tokana amin'ity fahagagana ity, avelao ny olona rehetra hanafana be ny orana mangatsiaka. Ny olona rehetra ao amin'ny fihomehezana, ny famaranana mahomby an'ny ekipa - hetsika fananganana. Tamin'ny alàlan'ity hetsika fananganana ekipa ity dia nanatsara ny fifankahazoana izahay, nanakaiky kokoa ny fihetseham-pon'ny tsirairay, nanatsara ny firaisan-kina sy ny firaisan'ny mpiasa rehetra ao amin'ny Hangzhou Hengao Technology, avelao izahay hanana hafanam-po bebe kokoa amin'ny asa ho avy.